Ny elefanta tanora nandositra ny mpihaza Mozambika dia nitifitra ny toeram-piompiana SA
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Mozambika » Ny elefanta tanora nandositra ny mpihaza Mozambika dia nitifitra ny toeram-piompiana SA
Zazalahy elefanta roa no voatifitra tany amin'ny faritr'i Komatipoort akaikin'ny Valan-javaboary Kruger rehefa avy natahoran'ireo mpihaza namakivaky ny sisintanin'i Mozambikana ny andian'ondrin'izy ireo.
Raha ny filazan'ny Mpumalanga Tourism & Park Agency (MTPA), ireo elefanta dia avy tamin'ny andiany iray nanimba ny fambolena any amin'ny faritra Coopersdal. Louw Steyn, mpitantana ny departemanta Hunting & Development an'ny MTPA, dia nilaza fa tanora ireo elefanta ary azo inoana fa mandositra ny sisin-tanin'i Mozambikana.
Video lahatsary navoakan'i The Lowvelder asehoy ireo elefanta roa alohan'ny hitifirana azy ireo. Raha ny filazan'ny tantsaha any an-toerana dia tsy salama ny zokin'izy roa lahy.
Araka ny voalazan'i Michele Pickover avy amin'ny EMS Foundation, ny fihenan'ny MTPA amin'ireo elefanta roa dia tsy azo ekena. 'Raha niezaka nandositra ireo [mpihaza mpihaza] ireo elefanta, ka nanjary nisaraka tamin'ny fianakaviany, dia tsy maintsy ho voa mafy izy ireo. Vao mainka tsy azo ekena intsony fa nanao ny zavatra nataon'izy ireo ny MTPA. '
Nolavin'ny MTPA ny haneho hevitra raha misy ny fanalefahana na ny vahaolana hafa nodinihina talohan'ny nanapahana hevitra. Nanamafy ny mpitondra tenin'ny MTPA The Lowvelder, na izany aza, ny elefanta dia tsy azo nafindra tamin'ny alàlan'ny angidimby hanenjehana ireo biby niaraka, 'satria nisy zanak'omby tao amin'ny andiany'.
Ny famonoana dia nanaraka akaiky ny fihaonambem-pirenena momba ny fitantanana ny fifandonana olombelona-elefanta any Afrika atsimo, izay nanatrehan'ny MTPA, izay nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fifikirana amin'ny Drafitra sy fenitra momba ny fitantanana elefanta ny sampan-draharaha misahana ny tontolo iainana.
Raha ny voalazan'ireto dia biby iray miteraka fahavoazana (DCA) ihany no hotifirina satria ny safidy farany taorian'ny tsy nahombiazan'ny safidy hafa, anisan'izany ny famindrana toerana. Ny fepetra DEA amin'ny fiatrehana DCA dia ny 'fanamafisana ny fahasimbana' ho an'ny olombelona sy ny biby. Milaza koa izy io fa 'ny fitantanana ny biby miteraka fahasimbana dia tokony hitovy amin'ny fahasimbana naterak'izany'.
MTPA dia namoaka fanambarana taorian'ny fitifirana fa ny elefanta dia niteraka fahasimbana be tamin'ny fambolena any an-toerana. Saingy hoy ny tantsaha Freddie Tecklenburg, kely dia kely ny fahasimban'ny fananana izay nitifiran'ny MTPA ny elefanta. 'Notapahin'izy ireo tao anaty tanimboly taloha ny sasany tamin'ireo kambana ary nanitsaka ny fantson-dripper izy ireo. Taorian'izay dia nifindra tany anaty ala izy ireo, ary notifirina izy ireo, 'hoy izy.
Herman Badenhorst, tale jeneralin'ny Mlambo Uvs ao amin'ilay trano mpifanila vodirindrina aminy dia nanaiky fa kely ny fahasimbana. Niampita ny fananan'ny Mlambo ireo elefanta alohan'ny nitifirana azy ireo tany amin'ny toeram-pambolen'ny Tecklenburg. 'Ny fahasimbana nateraka dia tsy ampy hanamarinana ny famonoana ireo biby,' hoy i Badenhorst. 'Ireo elefanta dia nandona ny siramamy sy ny akondro sasany rehefa namakivaky izy ireo, fa tsy nisy hitomaniana akory'.
Dr Yolanda Pretorius, filoha lefitry ny Elephant Specialist Advisory Group (ESAG), dia nilaza fa ny fombafomba takiana amin'ny famonoana DCA dia tsy arahina foana 'satria samy voafetra ny loharanom-pahalalana sy ny fahaiza-manao ao anatin'ny departemantan'ny fiarovana ny natiora. Izany dia mitarika amin'ny tsy safidy rehetra azo atao hiatrehana ny elefanta mamaky ny fizahana tsara. ' Nilaza izy fa ny DCA dia mety maty ao an-toerana ihany ary tsy misy famotopotorana raha toa ka mandrahona mivantana ny ain'olombelona izy ireo.
Steyn, na izany aza, dia nilaza fa ny Norms and Standards dia 'torolàlana momba ny fiatrehana ireo elefanta misy olana' fotsiny. Nilaza izy fa tsy misy afaka mamaritra hoe ahoana no tokony handaminana ny raharaha tsirairay avy mialoha ary izany dia atao araka ny fahendren'ny tompon'andraikitra.
Nomarihin'i Pretorius anefa fa 'fikambanana maro toa ny ESAG no vonona hanampy amin'ny fikarakarana ny fidirana an-tsehatra hafa amin'ny famonoana olona saingy matetika no maheno ireo tranga ireo tara loatra.'
Tamin'ny volana septambra tamin'ity taona ity, nisy lozam-pifamoivoizana elefanta niteraka fahavoazana toy izany koa voahidy teo akaikin'ny Valan-javaboary Kruger. Amin'ity tranga ity, omby elefanta telo no nandositra ny Associated Private Nature Reserve izay mifanila amin'i Kruger. Nanimba zaridaina mangahazo ary koa nisy fiantraikany tamin'ny fotodrafitrasa ho an'ny olombelona. Raha tokony hotifirina kosa dia nafindra tao anaty a famonjena elefanta sarotra natombok'i Elephants Alive, fikambanana iray manokana amin'ny fikarohana elefanta ary mampiroborobo ny fiaraha-miaina mirindra eo amin'ny olona sy ny elefanta.
Dr Michele Henley avy amin'ny Elephants Alive dia nilaza fa tamin'izany fotoana izany ny biby miteraka fahasimbana dia matetika kokoa noho ny trailblazers tratra teo anelanelan'ny fivelaran'ny olombelona mandroso amin'ny lalan'ny fifindra-monina taloha.
Araka ny The Lowvelder, elefanta roa hafa izay ampahany amin'ny andiany dia mbola any ivelan'ny faritra voaro, voalaza fa handeha amin'ny lalana atsimo mankany amin'ny faritra Mananga. Raha ny filazan'ny MTPA dia 'hiatrehana ireo elefanta ireo raha misy ny fitarainana voaray'.
Mandositra aho fa tohina aho: niresaka tamin'ny eTN ny minisitry ny raharaham-bahiny Zimbabwe, Walter Mzembi
Nosoniavina: Renaissance Lagos Hotel sy trano fonenana Marriott Executive